Wariyayaasha G/Dhexe oo Joojiyay in ay tabiyaan wararka Ahlusunna Waljamaaca – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dhuusamareeb ( Mareeg)-Tiro wariyayaal ah oo ka howl gala magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ee gobalka galgaduud ayaa joojiyey tabinta wararka ku saabsan maamulka ahlusuna ee ka arrimiya gobalada dhexe.
Wariye Cabdulqaadir Guure Barre oo ka mid ah wariyayaasha ka howl gala gobalka galgaduud ee bartamaha Somalia ayaa sheegay in wariyayaasha ka howl gala gobalkaasi ay goosgteen in aysan tebin wararka la xiriira maamulka ee ahlusuna taasina ay timid sida uu sheegay kadib kulan ku 26 wariye ay ku yeesheen magaalada dhuusa mareeb isla markaana ay ka soo saareen go,aankani la xiriiri joojinta wararka ku saabsan ahlu suna.
Cabdulqaadir guure barre oo ah wariye ka howl gala gobalka galgaduud ayaa tilmaamay in go,aankani ay gaaren uu ka dambeeyay handaado kaga timid maamulka ahlusuna islamarkaana uu maamulkaasi cadaadis ku saaray in aysan tabin karin wararka ku aadan maamulka galmudug taasina ay ku kaliftay wariyayaasha kulmay in ay joojiyaan wararka ahlusuna.
Dhinaca kale afhayeenka maamulka goballada dhexe Mursal Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefoow oo la hadlay idaacad Maxali ah ayaa beeniyey in maamulkooda uu dhibaateeyo wariyayaasha ku sugan gobolka Galgaduud isla markaana waxaa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay dhibaatada ay sheeganayaan wariyayaasha ka howl gala gobalka galgaduud isagoona xusay in looga baahanyahay wariyayaashaasi sheeganaya cadaadiska ay cadeeyaan cidi ay kala kulmaan waxyaabaha ay ka cabanayaan.
Wariyayaasha ka howl gala gobalka galgaduud ee bartamaha Somalia ee ku dhawaaqay joojinta wararka ku saabsan maamulka ahlusuna ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobalkaasi wariyayaal dhowr ah uu maamulka ahlusuna ku xiray.